Mukomana wemakore gumi nemashanu ekushayikwa kwemakore maviri anowanikwa mune imwe imba yekugara - SANTE PLUS MAG - Tamban RELAY
Mwana mukomana ane makore gumi nemashanu ekushayikwa kwemakore maviri akawanikwa mune imwe imba yekugara - SANTE PLUS MAG
Chisimba kune vana chinogona kukanganisa kugara kwavo muhupenyu hwavo hwese. Inofungidzirwa kuti pasi rese, zvakapotsa1 mabhiriyoni vana vari pakati pemakore maviri kusvika gumi nemaviri vakatambura mhirizhonga muna 2. Kungave kwemuviri, kwepabonde, kwepamoyo kana kunyangwe muchimiro chekuregeredza, mhirizhonga inogara ichikanganisa Psychology nehutano hwemunhu. Zvinoenderana neuchapupu hunofambiswa ne Dailymail, achiri kuyaruka ane makore gumi nemashanu anonzi akarasika kwemakore maviri akawanikwa ari mumba mefambi.
Tsikamutanda anourawa mushure mekuedza kudzivirira amai nemwanakomana wavo…
TELES RELAY 21722 Posts 0 mashoko
SoCon Basketball: Iyi inogona kuve mbiri-bhora ligi mumwaka we 2019-20 mwaka?
Tidjane Thiam anosiya Chikwereti Suisse nemari yepamusoro kubvira 2010 - Jeune Afrique
Ita kuti ushandise uye shandisa mabhegi mapoka mu Chrome - matipi